MakerKing: chitsva graphic uye yekugadzira adventure yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Muiti Mambo ndeye yemahara uye inogadzira Mario-senge mutambo wevhidhiyo uyo unowanikwa kuLinux kuchitoro cheValve chiutsi. Iyi papuratifomu mutambo wevhidhiyo unodhakwa, uye mushure mekutanga kuburitswa neruzhinji makore mana apfuura (pasi pezita rekuti Jumpaï), iko zvino yapinda zviri pamutemo muSteam Early Access, saka unogona kuyedza mahara izvozvi ...
MakerKind yakave imwe yeakanakisa chikuva vhidhiyo mitambo yezvakagadzirwa kazhinji. Uye ndezvekuti zvinokupa iwe mukana wekugadzira ako wega mazinga neakawanda sarudzo. Iwe unogona zvakare kutamba ivo uye nevamwe vazhinji, kana kutamba online kurwisa vamwe vatambi.
Kana zvakadaro hunhu yeMakeKing mutambo wevhidhiyo, chokwadi ndechekuti iine:
Zvinopfuura makumi matanhatu nematanhatu zvemutambo zvinhu zvine mukana wekubatana kwakasarudzika neumwe neumwe.
Yakanyatso kubatanidzwa uye nyore-kushandisa-chikamu chikamu mupepeti kuti ugadzire ako ega skrini.
Mhando dzakasiyana dzemitambo, senge yebasa modhi inowanikwa pamatanho ese.
MOB musiki iyo inokutendera iwe kuvaka ako akasarudzika MOBs. Muchiitiko chekuti iwe waisaziva, MOB chisikwa chinodzorwa nemuchina, kunge vhidhiyo mutambo wemutambo.
Level navigator kuitira kuti ugone kuwana akanakisa mazinga kubva kukirabhu inogara ichikura iyo inosanganisirwa muMakerKing.
Tsigiro yevatambi vemitambo yemavhidhiyo kana vatongi.
Vatungamiriri vezvikwata pamatanho ese, ane huwandu, chinzvimbo chepasirese, nezvimwe.
Iwe unokwanisa kugadzirisa mutambi wako nenzira yekutanga uye yemahara, nemamwe mawedzero-anozobhadharwa. Ndiyo nzira inoshandisirwa zita rekuremekedza iro musimboti mahara zvachose ...
Ichokwadi ndechekuti chinotaridzika zvakanaka kwazvo, uye ichinyatso kukuyeuchidza nezve mamwe echinyakare, chete nezvose zvinoshanduka uye kuita kwakasiyana kuti uwane divi rako rekugadzira zvakanyanya...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » MakerKing: chitsva chakajeka uye chekusika